Maaskaro Mashiinka Xakameeya, Maska Feydhka Maskaxda ee Kn95, Maaskaro wasakh leh - Teknolojiyada Shouzheng
Si buuxda oo otomaatig ah 1 + 1 mashiinka maaskaro
Kusoo dhawow Blue Eye
Hebei Shouzheng Technology Co., Ltd. waa xirfadle daryeel caafimaad oo soo saare aaladda qalabka caafimaadka, jumladleyda iyo dhoofinta, oo ku taal Shijiazhuang City, Gobolka Hebei ee Shiinaha.
Timaha qallalan iyo kuwa cilladaysan, markay hawadu qallalan tahay, marwalba waad maqli kartaa dhawaqa dhawaqa taagan “papapa”, fool xumo, raaxo-darro iyo xumaan. Timaha jilicsan ayaa kugu farxi doona, isla mar ahaantaana, waxaa jiri doona niyado badan oo lagu raaxeysto daqiiqada. Si kastaba ha noqotee, waxaad isticmaashay qaboojiyeyaal badan iyo timo ...
Ma garanaysaa nooca maaskaro ee ay tahay inaad u iibsato coronavirus ks Maaskaro dawooyinka, maaskaro caafimaad, maaskaro qalliin caafimaad, maaskaro ilaalin caafimaad, N95, KN95, 3M, iwm. Marka la eego magacyada waji-xidhka, dadku way wareersanaayeen oo wareersan yihiin. Noocyada maaskaro ee loo yaqaan 'caadiga ah' ayaa loo qaybin karaa qiyaastii 6 catego ...
Mawaxaad raadineysaa qaab nololeed caafimaad iyo shirkad wax soo saar caafimaad? Ma waxaad raadineysaa koox soo saarta xirfadleyda iyo kooxda wax soo saarka? Markaa Hebei Shouzheng Trading Co., Ltd. ayaa si muuqata u diidaysa doorashadaada ugu fiican. Hebei Shouzheng Technology Co., Ltd waa soo saare dawada caanka ah ee Shiinaha oo ay ka ...